Suuqgeynta Omnichannel waxay soo saartaa Macaamiil Daacad u ah oo Qiimo Badan | Martech Zone
Isniin, Disembar 31, 2018 Isniin, Disembar 31, 2018 Chuck Hengel
Astaamuhu waa inay ku jabaan silada khadka tooska ah iyo khadadka si ay ula kulmaan rajooyinka macaamiisha
Sidii hore loo yidhi, Hirar kacaya ayaa qaada dhammaan doonyaha. Mabda 'isku mid ah ayaa khuseeya suuqgeynta macaamiisha wax ku oolka ah. Olole warbaahineed oo awood leh ayaa isku dhufan kara saameynta waxqabadyada kale ee suuq-geynta, laga bilaabo kordhinta boggaaga iyo raadinta taraafikada si kor loogu qaado kaqeybgalkaaga warbaahinta bulshada iyo xiriirka bulshada.
Suuq galiyayaal waxtar leh ayaa tan ogaaday tan sanado waxayna geenayeen xeelado badan oo warbaahin ah si ay uga faa'iidaystaan ​​faa'iidooyinka. Si kastaba ha noqotee, inaad si fudud isugu toosiso hal-abuurkaaga kanaallada kala duwan hadda kuma filna. Maanta-xawaare sare, uber-shaqsiyeed, suuq kasta oo qalab ah, macaamiisha ayaa wada isbeddel cusub: omnichannel.
Markasta, meel kasta, hawlgal kasta oo qalab ah
Tixgeli sida macaamiisha ula macaamilaan magacyada maanta. Inta badan dadka Mareykanka wali waxay ku qulqulaan telefishanka, kaliya hadda waxay la socdaan hal gacan ku haynta kumbuyuutarka gacanta iyo taleefan casri ah ama laptop. Waxaan Tweet, qoraal, boostada, raadinta, raac, wada sheekaysiga iyo dukaan isku mar la show our jecel. Isla dhacdooyinka ayaa ka jira waxqabadyada dunida dhabta ah marka macaamiishu booqdaan dukaanka, maqaayada ama adeeg bixiyaha.
Dabeecadaha macaamiishu si aad ah ayey isu beddeleen tobankii sano ee la soo dhaafay; noocyada waa inay sidoo kale horumariyaan. Waaya-aragnimadu hadda waxay ku qulqulaysaa kanaallada, goobaha iyo aaladaha, iyadoo la rajeynayo in calaamaduhu aysan na aqoonsan doonin oo keliya, laakiin noo oggolaanaysa inaan si aan kala-hadh lahayn ugu dhaqaaqno gadaal iyo gadaal, laga bilaabo xayeysiiska TV-ga illaa bogga internetka, ka sheekaysiga khadka tooska ah ilaa dukaanka, barnaamijka illaa xarunta wicitaanka, dhammaantood leh isla heer shakhsi ahaaneed iyo adeeg.
Macaamiisha Omnichannel waxay keenaan qiimo badan
Waa amar dheer, in la hubiyo, gaar ahaan markay qas-wadayaasha warshadaha dhigtaan bar sare oo loogu talagalay hal-abuurnimada iyo ku-biiritaanka khilaaf la’aanta. Si kastaba ha noqotee, abaalmarinta waxay noqon kartaa mid weyn. A daraasad dhowaan lagu sameeyay Harvard Business Review ku dhowaad 50,000 macaamiisha tafaariiqda ah ayaa helay macaamiisha omnichannel-kuwa ku hawlan khadka tooska ah iyo kan khadka tooska ahba-aad bay qiimo ugu yeesheen sumadda. Waxay ku bixiyeen inbadan, khadka tooska ah iyo dukaanka intaba, waxay booqdeen goobaha tafaariiqda ee leben-iyo-hoobiye intabadan, waxay ahaayeen kuwo daacad ah waxayna ubadanyihin inay kugula taliyaan astaanta.
Si loo wanaajiyo kaqeybgalkaaga omnichannel, raac dhaqamadaan ugu wanaagsan:
Naqshadeynta a waayo-aragnimada kanaalka-agnostic. Halkii aad ka fikiri lahayd khibradaada moobiilka, waayo-aragnimadaada dukaanka iyo khibradaada desktop si gooni gooni ah, u arag aragtidaada. Aqoonso waxa barta taabashada iyo farriimaha habboon ay noqon doonaan, iyadoon loo eegin meesha macmiilku kula soo xiriirayo. Wax kasta oo aad naqshadeyso waa inay wax ka qabtaan su'aashan fudud: Sideed uga dhigi kartaa nolosha macaamilka sida ugu fudud ee ugu macquulsan?
Kala burburin silosooyinka ururada. Khibradaha ugu wanaagsan ee omnichannel waxay leeyihiin fudeyd aasaaskooda. Macaamiisha ayaa fiirinaya barta TV-ga, waxay u qorayaan lambarka SMS-ka si ay ugu sameeyaan sheekeysi khadka tooska ah ka dibna si habsami leh ugu gudbaan amarka dukaanka, iyadoo dhammaan saddexda wadiiqadood ay si wada jir ah u shaqeeyaan.
Xaqiiq ahaan, gaaritaanka heerkaas isuduwidda waxay u baahan tahay buuro dhaqaaq, gaar ahaan marka waaxaha kaladuwan ay u halgamayaan xakameynta. Khibradaha dhabta ah ee omnichannel waxay ka yimaadaan iskaashi iyo wadashaqeyn, iyadoo la adeegsanayo xogta, nidaamyada, hal abuurka, shaqaalaha iyo hoggaanka iswaafajinta. Kooxaha dijitaalka ah, sumadda, adeegga iyo dukaanku waa inay ka gudbaan xadka aan loo aabbo yeelin, xuduudda guriga dhexdiisa ah si ay u hor mariyaan khibradda macaamiisha.
Ka taxaddar arrimahaaga data. Ma jirto waddo agteeda ah. Waxay ubaahantahay xog qani ku ah awooda hawlgalka omnichannel. Iyo sida qaabdhismeedkaaga hoggaamineed, xogtaadu waa inay dhexgashaa wixii ka baxsan soohdimaha ururka. Taas macnaheedu waa xog-ururin iyo nidaamyo taageeri kara aragti-darajo 360-ah oo macaamiishaada ah isla markaana wadaagi kara is-dhexgalka macaamiisha, waqtiga dhabta ah ee dhow, iyadoon loo eegin aalad ama kanaal.
Si kale u dhig, macaamilkaagu ma codsan karaa tigidhka SMS-ka ee lagu soo bandhigo xayeysiiskaaga TV-ga oo ma ka soo dejisan karaa dukaanka wax iibsashada taleefannadooda casriga ah? Kooxda dijitaalka ah miyey ku ogaan doonaan waqtiga si ay u keenaan xayeysiis khadka tooska ah ah ama emayl bartilmaameed ah maalinta xigta? Markuu iibsadahaagu ku laabto gaadhigooda si uu wax u iibsado, markan laptop-ka, khibradda calaamaddu ma noqonaysaa mid isku xidhan?
Ku wareejinta dhaqanka shirkaddaada runta ah hay'ad omnichannel run ah waxay qaadataa waqti, laakiin tallaabo kasta oo horay loo qaado waxay kuu dhowdahay inaad ka jawaabto haa.
Si caqligal ah u shaqee, ma adka. Ololaha omnichannel ee wax ku oolka ah wuxuu qaadaa qaab dhammaystiran: mid warbaahinta, hal-abuurka iyo beddelaadku ku wada shaqeeyaan si wada-jir ah. Nala soo xiriir si looga wada hadlo sida ay wax uga badali karto ololahaaga soo socda.
Tags: khibradda macaamiishaomnichannelhawlgelinta omnichannelsuuq-geynta internetkatafaariiqdashaashadda labaad
Suuqgeynta waxqabadka waxaa ka buuxay ganacsato koronto. Markaa markii la gaadhay wakhtigii la dooran lahaa nolol, da 'yar oo Chuck Hengel ah ayaa soo jiitay warshaddan khiyaanaynta leh ee wax allifay iyo kuwa waalan. Wuxuu lahaa maskax tirooyin iyo mid ka mid ah suuqgeeyayaasha waxqabadka ugu weyn waddanka ee barxaddiisa, sidaa darteed wuxuu ka jaray ilkihiisa xoqidda xogta Fingerhut. Sannadkii 1997, Chuck wuxuu aasaasay naqshadaha suuq geynta